Haala uummatani Oromoo keessa jiru dhugumatti hubannee jirraa? -
3 thoughts on “Haala uummatani Oromoo keessa jiru dhugumatti hubannee jirraa?”
Waan Oromo waldiigsisu irrati yaroo keenya fixuu dhiifnee akkati Wayyaanee barbadeessinu otoo mala dhoonee nu fayyada. Anaaf Itiopia bilisoomtee fi Oromia bilsoomte jiddu garaa garummaa hinargu. Lachuu Oromodhaaf hinuma ta’u!! Oromoon akka guddina saba isaati aangoolee biyyaa murteesssaa ta’an qabatee mirgi ofiin of bulchuu eegamnaafiin raakkoon hinjiru. Maqaa “Gada Republikiin” diktateroota nutti dhufan hinbeeknu.
Kan filatu moo aktivistoota otoo hinstaane saba Oromo mara! Filannoo dura garuu diina buqqisuutu dursa. Kana irrat haa hojjennu!!
Itophia bilisoomteef Oromiyaa bilisoomte gidduu gargarmmaan natti hin mul’atu jetta obbooleeso. Itophian Impaayeera humna abashootan gargaarsa warra awurooppaa dabalate ijaaramteedha. Har’as humnotuma kanaan tikfamaa jirti. Impaayeri si balleessuuf si saamuu irratti hunderfamtee yoomiyu taanan saba ishee jalatti bulaniif bilisummaa argamsiisu hin dandeessu. Mee wan biraa dhiisii haala miseensonni paartii OFKO keessa jirani qofa ilaali. Kanaafuu kaayyoo ifa ta’e kaayyoo bilisummaa hanga repaablikaa oromiyaa ummanutti qabsaa’u qofa falli jiru. Kanaaf Ammoo lammiin oromoof quqamu hundi kompuutara duuba taa’ee karaan abaluu “gadaa dictatorship” nutti fiduuf jecha fidhatama hin qabnee facaasuu dhiifnee mee wana qabsichaa taakkuu tokko fulduratti tarkanfachisu haa gumachinu.
“Go for the moon. If you don’t get it, you will still be heading for a star.” Willis Reed
Oromoon maqaa Itiophiyaatiin wanni qabsaawuuf hin jiru. Itiophiyaan dhugumatti yoo fashistummaa TPLF jalaa baatee, ol-antummaan Habashaa hafee dimokiraasii dhugaan yoo ijaarame, Oromoon waan midhamu hin qabu. Garuu, Habashoota irraa dimokiraasii eeggachuun anaaf abjuu natti fakkaata. Yoo tahe illee, Oromoon Impaayerattii diigee, yoo barbaaddan kootta akka waliif gallutti deebisnee ijaarra, yoo jedheen qofa.
Rakkoo Itiophiyaa dhiisne, rakkoo nuti of keessatti qabnu furannee, Ajandaa Oromoo tokkicha, adda tokkicha godhanne, Oromoo akka “Nation” tokkootti deebisnee ummata keenya hacuuccaa fi saaminsa, irra dabrees ‘Genocide’ irratti aggamamee jiru jalaa baasuuf akka tokkootti ka’uu qabna!! Malaan maltummaa, angoof fi maallaqaaf hororuu dhiisnee, gabrummaan jiru dhaloota dhufutti akka hin dabarre hardha aarsaa barbaachisuu kafaluuf hunduu of qopheessuu qaba. Wal dhagahuu, waliif obsuu, wal gorsuu fi wal barsiisuu, “Sabboonumaa dhugaa” horachuu, isaa hardhaa osoo hin taane isa boruu yaaduu, dantaa ofii osoo hin taanee dantaa waloo, faayidaa harcaatuu osoo hin taane ifa bilisummaa borii hawwuutu nurra jira.
Waaqni Obsa fi qalbii nuuf haa kennu!